Inkqubo yokufakelwa kolungiso-Kutheni usebenzisa induction induction
Inkqubo yoQinisekiso loFakelo
Isalathiso seHLQ sikhokela ngaphakathi Iinkonzo zokufudumeza ngaphakathi Ukufakwa kwe-induction annealing kwenza ulawulo oluchanekileyo noluthembekileyo lweepropathi zezinto zesinyithi. Ukungeniswa kwe-induction kusetyenziswa ikakhulu ekuthambiseni nasekuxinzeleleni uxinzelelo, ukubonelela ngezibonelelo ezinkulu kwiindlela eziqhelekileyo. Ukuchithwa kwe-induction kwenza ukuba kususwe ubumdaka kwi-annealing eqaqambileyo. I-induction annealing isetyenziswa ikakhulu ekuthomalaliseni ukuthomalalisa kunye noxinzelelo lokuphelisa uxinzelelo kwaye inika izibonelelo ezinkulu ngaphezulu kweendlela eziqhelekileyo.Ukufakwa kwe-induction kubangela ukupheliswa kokungcola kwimathiriyeli ngexesha lokuqaqanjiswa okuqaqambileyo.
Ukunyuselwa kweNkcazo lunyango lobushushu lwentsimbi apho izinto zesinyithi zivezwa kubushushu obuphakamileyo kangangexesha elide kwaye emva koko zipholile kancinci. Isihlomelo sibonakaliswa ikakhulu lutshintsho olwenziwe kumacandelo amancinci anoxanduva lokutshintsha iipropathi zoomatshini. Injongo ephambili yale nkqubo kukunciphisa ubunzima bensimbi kunye nokuphucula ukuhamba kwayo.
Iinkonzo zokuphawula zibhekisa ngqo kwinkqubo yokuzisa umbandezelo kwawona manqanaba athambileyo. Inkqubo yethu yokuhendela ithambisa isinyithi kodwa ingekuko ngokupheleleyo. Ubungakanani bomsindo buxhomekeke kwinto, ubuninzi beqondo lokufikelela kunye nobude bexesha lokuphola. Inkqubo okanye ukukhululeka koxinzelelo kusetyenziswe ukuyeka iimpembelelo zomsebenzi obandayo; Oko kukuthi, ukuthambisa kunye nokwandisa ukusebenza kwesinyithi esenziwe ngenkani ngaphambili. Uxinzelelo lwangaphakathi lunokuvela njengesiphumo seenkqubo zokwenza impazamo zeplasitiki ezinje ngomatshini okanye ukugaya, ukupholisa ngokungalinganiyo kwinkqubo yokuwelda okanye yokuphosa, okanye inguqu yesigaba. Ukwahlula kunye nokugobhoza kunokwenzeka xa uxinzelelo lwangaphakathi lungasuswanga. Ukuphawulwa kuya kuphelisa uxinzelelo xa le nxalenye ishushu kubushushu obucetyiswayo, ibanjwe ixesha elide ngokwaneleyo, kwaye ngokuthe ngcembe ipholile kubushushu begumbi.
Kutheni usenza isongezo?
Ukufudumeza okwenziwa ngoku kunika izibonelelo ezininzi ngaphezulu kwezinye iindlela zokufudumeza kwaye zihlala zisetyenziselwa ukufaka izicelo. Ukufudumeza ngokungeniswa kunika ubushushu obunokuthenjwa, obunokuphindaphindwa, obungadibaniyo kunye namandla afanelekileyo ngexesha elincinci. Iinkqubo zikarhulumente eziqinileyo ziyakwazi ukufudumeza iindawo ezincinci kakhulu ngaphakathi kokunyamezelana kwemveliso, ngaphandle kokuphazamisa iimpawu zetsimbi nganye. Ukuchithwa kunokusetyenziselwa indawo okanye ngokufudumeza; ukubanjwa kwimeko kunokwenzeka ngokuxhomekeke kubude bexesha, ubushushu kunye neempawu zento.
Ukusetyenziselwa ukungeniswa ligama elibanzi ngokubanzi libhekisa ekufudumaleni kwesinyithi kwiqondo lobushushu elichaziweyo kwaye emva koko ipholile ngomgangatho oya kuthi ivelise i-micostosition ehlaziyiweyo. Usebenzise i-Induction, isinyithi sinokufudumeza ngokukhawuleza kubushushu kumjikelo ophindaphindiweyo ngaphandle kokunxibelelana neritha yentsimbi okanye ukufudumeza i-ambiors yendawo engqongileyo. Iipaseji ezipholileyo zeentsimbi ezirholayo zihlala zikwindawo evulekileyo ekhokelela ekubunjweni kweeperileite. Iintsimbi ezingasukiyo, ubhedu olunje okanye ubhedu, lunokupholiswa ngokukhawuleza kukucima emanzini. Iziphumo "zithambisa" izinto kwaye zenza ukuba zenziwe ngokulula kwisimo esifunekayo.
Ukunyuselwa kweNkcazo Ihlala isetyenziswa ekuqhubekiseni i-wire, ukwenza isixhobo ngokuchanekileyo, kunye nokwenziwa kweentubi. Izinto eziqhelekileyo zokungenisa i-annealing zibandakanya i-aluminium, i-carbon iron, kunye ne-carbide. Ezinye zeenzuzo zokungenisa i-induction zezi: amandla kwimfuno; imijikelezo yobushushu ekhawulezileyo; Ukupheliswa kwamandla okuqhubeka kwindawo yokufudumeza enkulu (okt ioveni); ukugcinwa kweendleko ngenxa yokuncitshiswa kwamandla; Ukufudumeza ngqo kwesinyithi hayi umoya ophakathi njengakwinkqubo yokuhambisa; Inkqubo ekhuselekileyo kuneendlela ezivulekileyo zomlilo; ukuphuculwa kolawulo lwenkqubo yokufudumeza nokufudumeza iyunifri kubushushu obunikiweyo abangaxhomekekanga kubuchule bokusebenza.
Kutheni ukhetha i-HLQ induction yokwenza i-induction?
Siziinkokheli zeshishini kwizixhobo zokufudumeza kunye neeofisi e-China.
Ukunyusa ukunyusa luhlobo lokunyanga ubushushu yi-heater ye-induction, ukufudumeza isinyithi kwiqondo lokushisa elichaziweyo kwaye emva koko kupholile ngomgangatho oya kuthi kuvelise i-micostosition ehlaziyiweyo. Sebenzisa ukufudumeza i-Induction, isinyithi sinokufudumeza ngokukhawuleza kubushushu kumjikelo ophindaphindiweyo ngaphandle kokunxibelelana ekujolise kuyo, izinto zihlala zipholile emoyeni ovulekileyo. Iziphumo "zithambisa" izinto kwaye zenza ukuba zenziwe ngokulula kwisimo esifunekayo.
Isibonelelo sokungenisa igesi ekufuduseni:
1. Amaxabiso aphezulu emveliso
2. Indawo yokufudumeza encinci kunye nokungafuneki kwamandla rhoqo (okt i-oven)
3. Gcina iindleko ngenxa yokwanda kwemveliso kunye nokucutha iindleko zabasebenzi
4. Kulula ukulawula ukufudumeza ixesha kunye namaqondo obushushu
Kuba sisebenza ngokukhethekileyo ekushiseni kofakelo, abathengi bethu bayazuza kwizisombululo ezihlanganisiweyo zokungenisa izinto kumashishini amaninzi.
Abathengi bethu baphephe ukuvelisa uluhlu olugqithisileyo kunye nokusingathwa kokusetyenziswa kokungenisa izinto, okubangela inkunkuma encinci kunye nokuphucula iziphumo ngexabiso eliphantsi. Sinetekhnoloji ephezulu ye-notch, izixhobo, kunye neendlela zokuvelisa ezihlangabezana nemigangatho ephezulu kakhulu.